Mg Htet, Author at Lifestyle Myanmar
အရက်အစွဲလွန်ရောဂါ ရနေပြီဆိုတာ ပြနေတဲ့ အနီရောင်သတိပေးချက် ၉ ချက်
စိတ်ဖိစီးမှုတွေများစွာနဲနေထိုင်နေရတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အရက်သောက်သုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတာ ကြောက်ရွံဖွယ်ကောင်းလာပါပြီ၊ တချို့လူတွေကတော့အရက်နဲ့ဝိုင်ကို ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့သင်္ကေတတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပြီး တချို့ကတော့ဿမန်ထက်လွန်ကဲစွာသောက်သုံးမှုကြောင့် သူ့ကိုယ်သူနဲ့ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ခင်တဲ့လူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆုံးရှုံးစေရတဲ့အထိဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေရပါပြီ။ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကိုထိခိုက်တဲ့အထိဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးဆိုးရွားအောင်ထိဖြစ်လာစေပြီဆို အရက်သေ ာက်သုံးမှုကို ဆန်းစစ်သင့်ပါပြီ။ တချို့လူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့အရက်စွဲနေပြီ အရက်ကို...
ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီက ဘဝကိုယ်စီကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနဲ့ ကိုယ်သွားရမယ့် လမ်းကြောင်းပျောက်ဆုံးခြင်းတွေကို မလွဲမသွေခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ကျွန်တော်တို့ ဦးတည်ချက်ပျောက်ဆုံးနေသလိုဖြစ်ပါစေ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုမှာ နောက်ကျနေသလိုဖြစ်နေစေ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းတွေမှာပိတ်ဆို့ထားသလိုဖြစ်နေရင်ဖြစ်ပါစေ ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကို တိတိကျကျ သတိရနေဖို့အရာတွေရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာ မိတ်ဆွေတို့ရေတွက်နိုင်တာထက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ...
မသိတာပဲ ကောင်းတယ် (Ignorance is bliss)
ဒီကနေ့ Lifestyle Myanmarပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြောပြချင်တာက"မသိတာပဲကောင်းတယ်"ဆိုတာပါ။ (Ignorance is bliss).လူတွေကတော့ မသိတာက လျစ်လျူရှုတာက သုခ အာ့လိုပြောကြတယ်။ တကယ်တေော့ဟုတ်ပါ့မလား??? အဲစကားမစပ်.. ဟုတ်. တယောက်တည်းဆိုတော့...တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ပြတင်းပေါက်လေးတစ်ပေါက် ကလောကကြီးကိုအကျယ်ကြီးမြင်နေရတယ်။ ပန်းလေးတွေပွင့်နေတာလည်းမြင်ရတယ်...ဖျာလေးတစ်ချပ်က သူ့အတွက် အရမ်းကျယ်နေတယ်။...
လူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲ? သူတို့ဘာတွေးနေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
မျက်စိတွေဆိုတာ စိတ်ဝိညဉ်တွေအတွက် ပြတင်းပေါက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့မျက်စိအနေအထားကို ဖတ်တတ်ရင် ဒီလူတွေ ဘာတွေတွေးနေတယ် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သင်ခန့်မှန်းသိနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြ သရုံတင်မကဘူး အခြားသူတွေကိုလည်း နားလည်စေပါတယ်။ကဲဒီတော့ မျက်လုံးတွေကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲ ဆိုတာလေး...
Twin Flameနှစ်ဦး ချစ်သူတွေမဖြစ်ခင်နဲ့ ဖြစ်ပြီးနောက် ကြုံတွေ့ရမယ့် ထူးဆန်းတဲ့ ခံစားမှုများ
Twin Flamesဆိုတာ two bodies but one soul.စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုက ခန္ဓာနှစ်ခုထဲကိုခွဲဝင်နေခြင်းပါ သူကSoulmateနဲ့လည်းတူသယောင်နဲ့မတူပါဘူး။ "လူတစ်ယောက်အတွက် စိတ်တူကိုယ်တူ ချစ်သူ၊ ဝိညဉ်ဖက် လို့ဆိုကြတဲ့(Soulmate)တွေကိုအများကြီးတွေ့နိင်ပေမယ့် Twin flame ကတော့ တစ်ယောက်သာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်တည်းသောသူ။ ပျောက်ဆုံးနေသောကိုယ်တစ်ခြမ်းပါ။...
အတိတ်ဘဝက ကံကြမ္မာတွေပေါ်မူတည်ပြီး တွေ့ဆုံကြတဲ့ relationship ၃ မျိုးမှာ သင်က ဘယ်တစ်မျိုးလဲ?
သံသရာကိုယုံလား? ဒီမေးခွန်းကစမေးပြီး ဒီအကြောင်းလေးရေးဖို့ဆိုပါတော့။ သံသရာကိုယုံရင် ဘဝအဆက်ဆက်ဖြစ်တည်မှုတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့လက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလက်ခံပြီဆိုရင်တော့ အတိတ်ဘဝကကံကြမ္မာတွေပေါ်မူတည်ပြီး တွေ့ဆုံကြတဲ့ relationship တွေအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ အတိတ်ဘဝကကံကြမ္မာတွေပေါ်မူတည်ပြီး တွေ့ဆုံကြတဲ့ relationshipကို ၃မျိုးလောက်ခွဲလို့ရပါတယ်တဲ့။ ဒါတွေက တော့ Karmic mates, companion...
Suicide ဘာကြောင့် လုပ်ကြသလဲ? Suicide လုပ်သူတွေရဲ့ နောက်ခံ အကြောင်းတရား အချို့က ဘာလဲ?
ကိုယ့်ကိုသတ်သေခြင်း(Suicide) လုပ်ခြင်းဆိုတာ တစ်ကယ့်ကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း (Suicide)လုပ်ခြင်းဆိုတာ များသောအားဖြင့် ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေ မကျော်လွှားနိုင်တော့ဘူး၊ သူတို့ဟာ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ပြီး အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားရသလိုခံစားနေရတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာ သူတို့ကိုစာနာနားလည်ပေးနိုင်သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဖီလင်နဲ့ ခံနိုင်ရည်အားလုံးလဲပြိုသွားချိန်မျိုးတွေမှာ နာကျင်မှုအားလုံးနဲ့ဖိအားတွေဆီကနေ တစ်ခုတည်းသောလွတ်မြောက်ရာ တစ်ခုတည်းသောသက်သေအဖြစ် ရှုမြင်လေ့ရှိကြပါတယ်။...
အရမ်းချစ်ကြပါတယ်ဆိုပေမယ့် RSတွေ လမ်းခွဲရတတ်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းများ
ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့လက်တွဲခဲ့ပြီးနောက်မှ ငြင်းခုံရန်ဖြစ်ရတာ နှစ်ယောက်လုံးနာကျင်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ တခါတလေတော့လည်း ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ စကားများတတ်သလိုအနိုင်ရယူလိုမှုလေးနဲ့များတတ်ကြပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာ အရမ်းချစ်ကြပါတယ်ဆိုပေမယ့် RSတွေ လမ်းခွဲရတတ်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်.. နားလည်မှုလွဲခြင်း အယူအဆမတူခြင်း RSတစ်ခုမှာ အမြဲတမ်းကြီး နားလည်မှုတွေရှိ သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးက ရှားတာတောင်...
ရာသီခွင်တွေတိုင်းမှာ ထူးခြားချက်တွေ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာက ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့ သူတို့ရဲ့အလုပ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားကိုပြောပြချင်တာပါ။ မှန် မမှန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်. Aries သင်ဟာ ရုံးထဲမှာအခက်ခဲဆုံးအကြိုးစားဆုံးအလုပ်လုပ်သူတတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်စီမံကိန်းမပြီးဆုံးသည်အထိ သင်ဘယ်တော့မှအနားယူမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့စွမ်းအင်အားလုံးကို သင်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသမျှထဲကို ထည့်သွင်းပစ်လိုက်တယ်။...
Air Pollution ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်ဆံမလဲ?
စိမ်းစိုလန်းဆန်းနေတဲ့ လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းတွေရဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ လေထုကို ရှုရှိုက်ဖူးလား? ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိလိုက်ပဲ အဆိပ်တွေရောနေတဲ့ လေထုကို ရှုဖူးလား? အိုကေ ကျွန်တော်ခုပြောပြချင်တာက Air Pollution ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်ဆံမလဲဆိုတာပါ။ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေတဲ့သူတွေကို...